Haddii aad ku jirto ciyaarta suuqgeynta, waxaad horeyba u ogayd in otomatiggu fure u yahay gaaritaanka dhagaystayaasha saxda ah waqtiga saxda ah. Laakiin miyaad ogtahay imayllada otomaatigga ah ee kuu heli doona bangiga ugu weyn ee suuqgeynta suuqgeynta?
In kasta oo dad badani rumaysan yihiin in isgaadhsiin badan oo emayl ahi ay saamayn taban ku yeelan karaan dadaalkaaga suuq-geynta, farriimaha otomaatiga ah ee sidan oo kale caadi ahaan looma dhigin. Taasi waxay yareyn kartaa fursadahaaga inaad ku dhex gasho arrimaha soo-gaadhista. Maaddaama ay yihiin shakhsi iyo waqtigooda, waxay kordhin karaan hawlgelinta si weyn. Taasi waxay ka dhigan tahay furitaan badan, qiimeyn gujin-fiican iyo beddelaad.